February 13, 2020 Alinn Pya Comments Off on ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား
တကမ္ဘာလုံး တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ထားတယ်လို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဇီဝဗေဒဌာန ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန် မာ့ခ်ဗာလစ်တီတိုကို ကိုးကားပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ရေးပါတယ်။ ဗာလစ်တီတိုဟာ တိရစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အထူးပြု လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လင်းနို့တွေဆီက သွားရေနဲ့ […]
February 13, 2020 Alinn Pya Comments Off on အမည်ပြောင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ််​ပြောင်း၊ ဖခင်​အမည်ပြောင်း၊ ကျောင်​း​ပြောင်​း လက်​မှတ်​​ ပျောက်​ဆုံးခြင််းတို့ အတွက်် ဘာတွေ လိုအပ်သလဲဲ?
ပြောင််းလဲခြင််း အမျိုးမျိုး မွေးသက္ကရာဇ်် အမှန် ပြောင်းလဲခြင်း ကျောင််းသား/သူ အမည်မှန် ပြောင််းလဲခြင်း ဖခင်အမည်မှန် ပြောင်းလဲခြင်း ကျောင်းပြောင်း လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင််းများ အတွက်် မိိဘပြည်သူများ သိိရှိနိုင်ကြစေရန် သာမက လုုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့့် အညီ ဆောင်ရွက်နိိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ရင်း ဖြစ်ပါသည်​။ ဦးအောင်မြင့်ရီ ပညာရေး အမည္ေျပာင္း၊ ေမြးသကၠရာဇ္္​ေျပာင္း၊ ဖခင္​အမည္ေျပာင္း၊ ေက်ာင္​း​ေျပာင္​း လက္​မွတ္​​ ေပ်ာက္​ဆံုးျခင္္းတို႔ အတြက္္ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲဲ? ေျပာင္္းလဲျခင္္း […]
February 13, 2020 Alinn Pya Comments Off on လူ သား​ဖောက်​ဂိုဏ်​အားဖမ်​းဆီး
လူတွေ လူစိတ်ပျောက်ကုန်ကြပြီလား..ဘေးဆိုး ကပ်ဆိုးတွေ ..ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမပြောနဲ့လေ ဒီလို အဖြစ်တွေ ဘယ်လောက်များများ ဖြစ်နေကြပြီလဲ .. 13.02.2020 Bangkok ထိုင်​းဘန်​​ကောာက်​မြို့အတွင်​းဒီက​နေ့အထူး​ထောက်​လှန်​း​ရေးရဲတပ်​ဖွဲ့မှ လူသားများသား​ဖောက်​ပြီး​မွေးလာ​သောခ​လေးငယ်​များ၏အင်္ဂါအစိတ်​အပိုင်​းတချိုးကိုခွဲစိတ်​ယူကာ ​ရောင်​းချ​နေကြသည်​့ – ဂိုဏ်​းကိုသိရ၍ အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုးသ္မီးများကို ထား​သောအိမ်​တ​ဆောင်​ထဲကိုဝင်​​ရောက်​ဖမ်​းဆီးကြောင်​းသိရပါသည်​ အမျိုးသ္မီးတဦး၏အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခမှာ ခ​လေးငယ်​တ​ယောက်​​အောင်​မြင်​စွာ​မွေးဖွားနိုင်​လျင်​ ဘတ်​​ငွေ ​လေးသိန်​းမှငါးသိန်​းအထိရ​ကြောင်းသိရပါသည်​ Credit to KHM Rakhita news လူ သား​ေဖာက္​ဂိုဏ္​အားဖမ္​းဆီး လူေတြ လူစိတ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကျပီလား..ေဘးဆိုး ကပ္ဆိုးေတြ ..ေရာဂါဆိုးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာလဲမေျပာနဲ႕ေလ […]
February 13, 2020 Alinn Pya Comments Off on ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်‌တောမီးလောင်ရာမှာတဆင့်‌လူနေအိမ်(၂)လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံး
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မိချောင်းဂေါင်းကျေးရွာအုပ်စု ဥသျှစ်ခင်ကျေးရွာတွင် ၂၀၂ဝဖေဖေါ်ဝါရီ၁၃ရက်ညနေ (၃)နာရီ ဝန်းကျင်အချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာတာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးမှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် သတင်းပေးပို့လာသဖြင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးလောင်ရာ‌နေရာသို့ မီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်(၁)စီး၊ရေသယ်ယာဉ်(၁)စီး သန္ဓေတပ်ဖွဲ့ဝင်(၁၂)ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၂၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၂)ဦးတို့ဖြင့်သွားရောက်၍ငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးသောနေရာသည် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်း၏ အနောက်မြောက်ဘက်ခန့်မှန်း (၈)မိုင်ခန့်အကွာတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး ညနေ (၄) နာရီအချိန်တွင် မီးလုံးဝငြိမ်းသတ်နိူင်ခဲ့‌ ကြောင်း‌ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှသိရသည်။ မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းမှာ တောမီးလောင်ကျွမ်းရာမှတစ်ဆင့် မိချောင်းဂေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥသျှစ်ခင်ကျေးရွာအစွန်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော […]
February 13, 2020 Alinn Pya Comments Off on ပုဂံဘုရားမှာ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲ တည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို စုံစမ်းနေ